Toamasina: Rongony mahery vaika tratra tao amin'ny Port
vendredi, 25 janvier 2019 17:14
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany momba ilay raharaha rongony mahery vaika tratra tao anatin’ny sambo MSC Lucia, miantsona ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ireo tompon’andraikitra misahana ny fanadihadiana, ahitana ny Ladoany, ny Zandary sy ny Polisy miasa eo anivon’ny seranana, ary ny “Capitainerie” ny seranan-tsambon’i Toamasina, misahana ny fampidirana sy famoahana ireo sambo tonga sy hiala eto Toamasina.
Telo fonosana ireto rongony mahery vaika tratra tao anaty fonosana matevina ireto, ka milanja 03kgs sy 138g izany raha ialan’ireto fonosanana nanafenana azy.
Tombanana ho 600 tapitrisa Ariary ny vidiny.
Teo amin’ny “pont” ny sambo sy tamina “palette” misy entana alefa any Maurice, ary tany anaty lakalin'ny sambo no nahitana azy ireo nandritra ny fisavana.
Avy any Pakistan sy ny faritra manodidina azy no niavian’izany, izay ampidirina antsokosoko amin’ireo entana hafaran’i Madagasikara any amin’ireo firenena ireo, izay tena nahazo vahana nanomboka ny taona 2012 no mankaty.
Ahiana ho nisy firaisana tsikombakomba tamin’ireo tatsambo entin’ity sambo MSC Lucia nahatrarana azy ity ny fampidirana izany rongony mahery vaika izany tao anatin’ity sambo ity, ka izay no mbola mampiantona ny fiaingan’ity sambo ity hiazo ny nosy Maurice, noho ny fanadihadiana mbola atao amin’ireo mpiasan-tsambo ireo.
Tsy sambany no nahatrarana fanondranana antsokosoko “héroine” ataon’ny sambo ao anatin’ny vondrona MSC mpanao zotra Toamasina – Maurice toy izao, fa efa nanao toy izao koa ny sambo “Cailas” ny 10 janoary teo, saingy ny fahatongavany teo Maurice no nahatrarana azy ka nilanja 04kgs sy 200g ny “heroine” tratran'ny Ladoany Morisiana tamin’izay fotoana izay.